Mareykanka oo askar dheeri ah u diraya Afqaanistaan - BBC News Somali
Mareykanka oo askar dheeri ah u diraya Afqaanistaan
Image caption Dagaalka Taalabaan: Mareykanka oo laga yaabo in uu 3,000 oo askari oo dheeraad ah u diro Afqaanistaan
Malteriga Mareykanka ayaa ka baaraan degaya in ay 3,000 oo askari oo dheeraad u ah diraan Afqaanistaan si ay ula dagaalamaan Taalabaan. Mas'uuliyiinta Malaterigu waxaa kale oo ay doonayaan awooda ay ku bartilmaansan karaan mas'uuliyiinta Taalabaan.
Sarkaal aan magiciisa shaacin ayaa sheegey in aanu Donald Trump ansixin qorshahan. Waxa laga yaabaa in dalabkan ku jiro codsi ah in ay wadamada gaashaanbuurta Nato iyaguna diraan 3,000 ilaa 5,000 oo askari.
Waxa iminka Afqaanistaan jooga ilaa iyo 13,000 askeri oo ka tirsan Nato oo, 8,400 oo ka mid ahi ay ka socdaan Mareykan.
Dagaalka uu Mareykanku kula jiro Taalibaan waxa uu si rasmi ah u dhamaadey 2014kii, laakiin ciidammo gaar ah oo Mareykan ah ayaa taageero u fidiya ciidammada Afqaanistaan.
Bishii Febraayo, ayuu abaanduulaha ciidamada Mareykanka ee Afqaanistaan Gen John Nicholson u sheegey guddi ka tirsan Senatka in loo baahan yahay "ilaa dhowr kun oo askari oo kale"
Bishii aynu soo dhaafney ayey Taalabaan ku dhawaaqeen in ay bilaabayaan duulaanka Gu'ga, kadib markii ay askarta Afqaanistaan ay kaga dileen 135 askari xero malateri oo ku taala magaalada Mazar-e Sharif ee waqooyiga.
Image caption Khariidada Afqaanistaan
Saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in qorshaha cusubi uu ballaarin doono duulaanka askarta Mareykanka, Wasaarada Gaashaandhiga Mareykankuna ay qorsheyn doonaan tirada askarta.
Madaxweyne Trump ayaa la filayaa in uu go'aan qaato ka hor inta aanu u ambabixin shirka Nato ee ka qabsoomaya Brussels 25ka bisha May.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa xilli u qabtey in uu yareeyo askarta Mareykanka ee ku sugan Afqaanistaan, waxaanu ka qaadey awooda ay Wasaarada Gaashaandhiga Pentagonku ay ku bartilmaansan karto mas'uuliyiinta Taalabaanta.